Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थाले !
एकीकृत माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहका क्रममा स्थापित 'जनसरकार’ ले गरेका निर्णय वर्षौंपछि अनुमोदन गर्दा विरोध हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भनेर कसैले स्वीकार गर्यो भने अज्ञानता हुन्छ। तर विरोध हुन्छ भन्ने जानेर पनि उसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले 'जनसत्ता’ का निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो किन ? यही
'किन’ को जबाफमा लुकेको छ- एकीकृत माओवादीले विगत डेढ दशकदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको राजनीतिक सफलताको रहस्य। यस प्रकारको सफलता नेपालका अरु कुनै दलले पनि पाएका छैनन्। उसको पछि-पछि सफलता हासिल गर्नेहरुमा मधेसवादी दलहरु देखिन्छन्। तर माओवादीको सफलताको दाँजोमा त्यो निकै कमजोर लाग्छ। एकीकृत माओवादीलाई यस प्रकारको सफलता मिल्नुका विभिन्न कारण हुनसक्छन् त्यसमध्ये एक हो- दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडिको लेनिनको नियम। रुसी नेता लेनिनले प्रतिपादन गरेको यस नियमलाई कम्युनिस्टहरु माच भेट्नासाथ दोहोर्याउने गर्छन् तर त्यस नियमलाई व्यवहारमा उतार्ने कामचाहिँ एकीकृत माओवादीले नै गरिरहेको छ त्यसैले निरन्तर एक्लो सफलता उसलाई मिलेको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक 'दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि’ को नियमको अभ्यास माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालीन 'जनसत्ता’ को निर्णय सरकारबाट अनुमोदन गरेर र अन्य दलहरुसँगको वार्तापछि फिर्ता लिएर गरेको छ। सरकारबाट अनुमोदन गर्नु उसको दुई कदमको फड्को थियो भने 'हाललाई स्थगन’ वा फिर्ता गर्ने निर्णय एक कदम पछि सरेको अभ्यास। दुश्मनलाई अलमल्याउन र आफ्ना महत्वाकांक्षी कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न लेनिनको नियम निकै काइदाको साबित भएको छ माओवादीका लागि। उसको व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी र अन्य राजनीतिक दलप्रतिको उपेक्षा भाव प्रस्ट देखिए पनि उसले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना एजेन्डा पारित गराइछाड्ने सफलता भने हासिल गरेको छ। अस्थायी शिविरमा हिजो लडाकूको संख्या बढाउँदा होस् वा आज सेनासमायोजन वा पुनःस्थापना गर्दा होस् माओवादीले लेनिनको यही सिद्धान्तको अनुशरण गरेको छ।
'हाम्रा जनसेना तीस-चालीस हजार छन् भनेर हामीले दाबी गर्यौं प्रतिक्रियावादीले आठ-दश हजारभन्दा बढी छैन भने अन्त्यमा उन्नाईस हजारमा सहमति भयो वास्तवमा हामी पाँच-छ हजार त थियौं नि’ -भनेर माओवादी अध्यक्षले चितवनको शक्तिखोरमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मजाले हँसाएको कसैले बिर्सेको छैन। सभासद् बालकृष्ण ढुंगेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्नमा होस् वा आज महँगीमा परेका जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपेर अझ धराशयी बनाउँदा होस् माओवादीले लेनिन मन्त्र बिसे्रको छैन।
'विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्दा हामीकहाँ ८५ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल मजाले वितरण हुन सक्छ’ उपभोक्ता हित संरक्षण माचका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्नुहुन्छ- 'यो सबै आयल निगम र सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो।’ उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ- 'राज्यले आफ्नो कमजोरीको मूल्य निरीह जनतामाथि थोपर्नु लाजमर्दो कुरा हो।’
पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकहरुको संगठन ओपेकका अनुसार आज प्रशोधित पेट्रोलको प्रतिब्यारेल मूल्य करिब १ सय १२ अमेरिकी डलर रहेको छ। एक ब्यारेलमा १ सय १९ लिटर हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 'दुई कदम’ ले बढाएको सरकारले विद्यार्थीको सर्वपक्षीय दबाबपछि 'एक कदम’ पछि सरेर केही मूल्य घटायो भने 'परम्पराअनुसारकै व्यवहार’ भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक कदम पछि सर्ने संकेत देखाउँदै सरकारले विद्यार्थीलई वार्ताका लागि आहृवान पनि गरेको छ। तर आन्दोलित विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिइरहेका छन्।
नेविसंघ उपाध्यक्ष नैनसिंह महरले आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट मूल्यवृद्धि फिर्ताको मागप्रति गम्भीर नदेखिएका कारण अब प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गरिन्छ भन्नुभएको छ। दुई कदम अघि र एक कदम पछि सर्ने माओवादी अभ्यासले पार्टीलाई लाभ पुर्याए पनि शान्तिप्रक्रिया र समयमा संविधान जारी हुने जनअपेक्षामा रहेका जनतालाई भने निराश बनाएको छ। 'हिजो हामी हतियारका साथ युद्धका मोर्चामा थियौं आज पनि लडाइँमै छौं तर यत्ति हो मोर्चा र स्वरुप बदलिएको छ’ -माओवादी नेताहरुले बारम्बार सत्य बोलेका छन्। तर नागरिक समाजकै कमजोरी हो उनीहरु 'माओवादी आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका जनताको पनि विचार सुन्ने लोकतन्त्रवादी बनिसके’ भनेर विश्वास गर्न थालेका थिए।
माओवादी जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने र शान्तिप्रक्रियामा पनि सरिक नहुने अडान नेपाली कांग्रेस र एमालेले लिएपछि सोमबार माओवादीका शीर्ष नेताहरुले 'एक कदम पछि सर्ने’ संकेत देखाएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे तीन दलका शीर्ष्र नेताहरुको हिजो कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा बसेको बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले 'जनसत्ताको निर्ण फिर्ता गर्ने टुंगो तीन दिनभित्र लगाउने’ संकेत दिनुभएको छ। 'छलफल सकारात्मक रह्यो’ भन्ने उहाँको बोलीलाई सहभागीहरुले एक कदम पछाडिकै अर्थमा बुझैका छन्।
तर माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हिजोका दुस्मनलाई आज पनि मित्र देख्न नसक्नु र 'नयाँ मोर्चाकै लडाइँ’ लडिरहनु नेपालको हितमा हुन सक्दैन। सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भनेको पनि छ- 'महँगीको असर कम गर्न विद्यार्थी तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनयापनमा राहत प्रदान गर्न सरकालाई अनुरोध छ।’